Jordi Alba oo war farxad leh la wadaagay jamaahiirta kooxda Barcelona – Gool FM
Jordi Alba oo war farxad leh la wadaagay jamaahiirta kooxda Barcelona
(Barcelona) 24 Feb 2019. Daafaca kooxda Barcelona Jordi Alba ayaa go’aamiyay heshiis kordhintiisa kooxda reer Catalonia, maadaama uu xiiseenayo inuu baaqi ku sii ahaado garoonka Cump Nou mudo aad u fog.
Jordi Alba ayaa kadib guushii weyneed ay ka gaareen kooxda Sevilla wuxuu saxaafda kaga warbixiyay mustaqbalkiisa kooxda Barcelona.
“Waxaan jeclaan lahaa inaan halkaan sii joogo, waxaa xili dhow la maqli doonaa war ku aadan heshiiska cusub ee aan u saxiixi doono kooxda Barcelona”.
Yeelkadeed Jordi Alba ayaa intaas kadib wuxuu ka hadlay guusha ay ka gaareen kooxda Sevilla wuxuuna yiri:
“Inaad guul gaarto kulamada noocan oo kale, waxay ku siinayaan fursado badan, waxaan rajeyneynaa inaan sii ilaashano farqiga dhibcaha”.
Heshiiska Jordi Alba uu ku joogo kooxda Barcelona ayaa wuxuu ku eg yahay bisha June 2020, taasoo la micno ah inuu xor u yahay inuu wadahadal la galo koox kasta, laga bilaawo bisha Janaayo ee soo aadan.
Liverpool ama Manchester United kooxdee ayaa fiican?... Waxaa ka jawaabaya tababare Solskjær
Allegri oo markii ugu horeysay ka hadlay dabaaldagii Simeone ee muranka xoogan dhaliyay